“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၉) ဇတ်သိမ်း | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » “ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၉) ဇတ်သိမ်း	12
“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၉) ဇတ်သိမ်း
Posted by aye.kk on Aug 3, 2012 in My Dear Diary | 12 comments
ရ ထား ပြ တင်း ပေါက် မှာ ရှူ့ ခင်း တွေ ငေး မော ကြည့် ယင်း ၊ အ တွေး များ က ဟို တ စ ၊ သည် တ စ ပြန့် လွှင့် နေ ပါ တယ် ။
သြော်…. ဟု သာ စိတ် ထဲ မှာ ဆို ပစ် လိုက် ချင် မိ ပါ တော့ တယ် ။ အစ် ကို သု ခ က မ မျှော် လင့် ထား သည့် အ ပြု အ မူ များ ပြု ကာ ၊ နှုတ် ဆက် ခဲ့ ခြင်း အ ပေါ် ၊ အံ့ သြ နေ မိ ၊ စိတ် ပူ မိ ရ ခါ ဘယ် လို အ ခက် ခဲ များ ၊ ရှိ နေ မ လဲ ဟု လည်း ဆို သည့် အ တွေး များ ၀င် ရောက် ပြီး ၊ စိတ် အ နှောင့် အ ယှက် ဖြစ် ခဲ့ ရ ပါ တယ် ။
ရ ထား စီး နေ မိ ယင်း က ၊ အ ရင် က အ ကြောင်း များ ၊ စိတ် ထဲ အ မှတ် ရ နေ မိ ပြန် ပါ တယ် ။
အ ရင် တုံး က ဦး ပေး ထား သည့် ၊ ဂ ဏန်း သ ချာင်္ အ က္ခ ရာ စဉ် သည့် ၊ က စား စ ရာ လေး အား ဆော့ ကြည့် ရာ ၊ တော် ယုံ နှင့် က မ ရ ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် အား ပြော ပြ ခိုင်း သော် လည်း ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် က မ ပြော ပြ ။ က စား စ ရာ အား စိတ် အ လွန် တို စွာ ဖြင့် ဆော့ က စား နေ ရင်း အိမ် ပြန် ရောက် ခဲ့ သည် ကို ပြန် မြင် ယောင် နေ မိ ပါ တော့ တယ် ။
အိမ် ပြန် ရောက် ပြီး ၊ ဘေး အိမ် က သူ ငယ် ချင်း နှင့် နှစ် ယောက် သား ဂေါင်း ချင်း ဆိုင် ၍ တိုင် ပင် ဆော့ က စား သည့် အ ခါ မှ သာ ၊ ဆော့ နည်း အား နား လည် သ ဘော ပေါက် ခါ ၊ သိ မြင် သွား ခဲ့ သ ဖြင့် ပျော် လိုက် ရ သည် ဖြစ် ခြင်း ပင် ။ မ ပြော ပြ သည့် အစ် မ ကြီး ကျယ် အား ဂုဏ် ယူ စွာ ကြွား လျှင် ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် က အ ထင် မ ကြီး ။ နှစ် ဂေါင်း ပေါင်း မှ သာ က စား နိုင် သည် ။ ကေ့ အား ဥာဏ် ပေ တုံး သည့် သူ ဟု သာ ဆို ပါ တော့ သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် နှင့် က စ ကား ပြော လို့ အ ဆင် ကို မ ပြေ နိုင် ခဲ့ ပါ ။
စဉ်း စား ရင်း ပဲ ခူး ဘူ တာ ၌ ၊ ရပ် နား ဆိုက် ကပ် သည့် အ ချိန် တွင် ၊ အ တွေး များ လည်း ရပ် သွား ပါ တော့ တယ် ။
ယင် နား စာ များ စား မှာ စိုး ၍ ၊ အ ဒေါ် မှာ သည့် စ ကား များ နား ထဲ ၀င် ရောက် လာ ပြီး ၊ မုန့် စား ချင် စိတ် လည်း မ ရှိ ပါ ။ မြေ ပဲ လိတ် များ ကို တော့ ၊ အ ဖေ အ လွန် ကြိုက် နှစ် သက် ပါ သည် ။ စ က္ကူ ဖြင့် အ ကျ အ န ပတ် ပြီး လိတ် ထား ကာ ၊ ပ လပ် စ တစ် အိပ် တွင် ထည့် ပြီး ရောင်း ချ ခြင်း ဖြစ် ၍ ၊ မြေ ပဲ လိတ် က တော့ အ မြင် တွင် သန့် ရှင်း သ ဖြင့် ၊ အိမ် ပြန် လက် ဆောင် ၀ယ် ခဲ့ ပါ တယ် ။
အ်ိမ် ရောက် ပြန် တော့ ၊ အ ဖေ ပေး သည့် မုန့် ဘိုး နှင့် သိ တတ် စွာ ၀ယ် ပြန် လာ တော့ ၊ တ အိမ် သား လုံး က ကျေ နပ် သ ဘော ကျ ကြ ပါ တယ် ။ အ ဖေ က တော့ ငါ့ သ္မီး လေး သိ တတ် သည် တဲ့ ။ ကေ က တော့ ၊ ဘာ ပဲ ပြော ပြော ချီး မွမ်း ခံ ရ တာ ကို တော့ လွန် စွာ သ ဘော ကျ ပြီး ပျော် ရ ပါ သည် ။
နွေ ရာ သီ ကျောင်း ပိတ် ထား သည် မှန် သော် လည်း ၊ ကြက် ခြေ နီ အ သင်း ၀င် ၊ လမ်း စဉ် လူ ငယ် ထဲ ၀င် ထား သည့် အ တွက် ၊ နွေ ရာ သီ ကျောင်း ပိတ် ရက် အ တွင်း ၊ ကျောင်း နှိုက် ဖွင့် လှစ် ထား သည့် ၊ မွမ်း မံ ရက် တို သင် တန်း တွေ ခေါ် တာ ကို သွား တက် ရ တတ် ၍ အိမ် မှာ တော့ အ နေ နည်း ပါ သည် ။
စာ တိုက် မှူး ၏ သ္မီး နဲ့ က ၀ါ သ နာ တူ ၊ ကြက် ခြေ နီ အ သင်း ၌ ၊တ ဖွဲ့ တည်း သား ဖြစ် ၍ ၊ ကျောင်း နှိုက် နွေ ရာ သီ ရက် တို သင် တန်း ရှိ လျှင် ၊ အ မြဲ တန်း အ တူ တူ ဆုံ နေ ကြ ဖြစ် နေ ပါ သည် ။
တ ရက် တွင် ၊ စာ တိုက် မှူး ၏ သ္မီး ဖြစ် သူ ၊ သူ ငယ် ချင်း က ငါ့ ဆီ မှာ မင်း စာ တစ် စောင် ရောက် နေ တယ် ဟု ပြော ပြီး လက် ထဲ လာ ထည့် ပေး ပါ သည် ။သူ ငယ် ချင်း အား လည်း ကျေး ဇူး နော် ဟု ပြော ပြီး ၊ အိမ် ပြန် ရောက် မှ သာ ၊ အိမ် အ ပေါ် ထပ် ရှိ လှေ ခါး သို့ တက် ပြီး ၊ လှေ ခါး အ လယ် နှိုက် ထိုင် ကာ ၊ စာ အိပ် ကို ဖွင့် ဖောက် လိုက် ပါ သည် ။ စာ အိတ် ထဲ က ထွက် လာ သည့် ၊ စာ ရွက် က….။ အ ဖြူ နှင့် ပန်း ရောင် လွှ လွှ လေး ။ နှစ် ရောင် စပ် ထား သည့် အ ပေါ် တွင် ၊ မှင် အ ပြာ ဖြစ် ရေး ထား သော စာ ။ စာ ပါ အ ကြောင်း အ ရာ များ က အောက် ပါ အ တိုင်း ပင် ။
အ ဒေါ် အိမ် မှာ လာ ဆုံ ရ လိမ့် မယ် လို့ …
ထင် မ ထား မိ ခဲ့ ဘူး ၊ တ ကယ် ပါ ။
တ ပေါင်း လ ပြည့် နေ့ က ကေ့ ကို အ နီး ကပ် ဆုံး တွေ့လိုက် ရ တာ ။ ကိုယ့် ဘ ၀ မှာ ပ ထ မ ဦး ဆုံး ၊ မိန်း က လေး တ ယောက် ကို ၊ ကိုယ့် အ နေ နဲ့ က အ နီး ဆုံး နီး နီး ကပ် ကပ် ထိ တွေ့ မြင် ဖူး မိ ရ ခြင်း ပါ ဘဲ ။
ဓါတ် လှေ ခါး စီး တဲ့ အချိန် ။ ကိုယ့် ရင် တွေ အ ရမ်း ကို တ ဒိတ် ဒိတ် နဲ့ ကျယ် လောင် စွာ ကို ခုံ နေ ခဲ့ တာ ။ ပ ထ မ ဦး ဆုံး အ ကြိမ် ။ ဖြစ် ပေါ် တဲ့ ခံ စား မှု ပါ ။ စိတ် လည်း သိတ် ပြီး လှုပ် ရှား ခဲ့ ရ လို့ ထင် ပါ တယ် ။
ကိုယ့် စိတ် ထဲ မှာ ။ ကေ့ ကို နား စွင့် ပြီး ကိုယ့် ရင် ခုန် သံ တွေ ကို ပေး နား ထောင် ချင် နေ မိ တာ အ မှန် ပါ ဘဲ ။ ကေ ကြား နိုင် ခဲ့ မှာ ပါ ။ လူ တွေ တိုး ဝှေ့ ကြပ် ညှပ် ပြီး ပိတ် သိတ် တိုး နေ တာ ။ ကေ့ ကို သူ များ တွေ ထိ မှာ စိုး ကြောက် မိ တာ ရယ် ၊ စိုး ရိမ် စိတ် နဲ့ ဆွဲ ပြီး ကိုယ့် ရင် ခွင် ထဲ သွင်း မိ သ လို ဖြစ် သွား ခဲ့ တာ ။ ကေ့ ကို အား လည်း နာ မိ တယ် ။ အား လည်း မ နာ သ လို ပါ ဘဲ ။ ကေ့ အ လှ က ကိုယ့် ကို တ ကယ် ဖမ်း စား ထား ရက် ခဲ့ လို့ လေ ။ တ ကယ် ဖမ်း စား ထား နိုင် ခဲ့ တယ် ။ ကိုယ့် ရင် တွေ အ ရမ်း ကို ခုန် ခဲ့ ရ တယ် ။ ဓါတ် လှေ ခါး ကြီး ပျက် ပြီး ၊ ရပ် သွား စေ ချင် တဲ့ စိတ် ဖြစ် ခဲ့ မိ တယ် ။ ဘု ရား က တန် ခိုး ကြီး လွန်း နေ တာ ။ ဘယ် ဖြစ် နိုင် မ လည်း နော် ။ ကိုယ် တောင် င ရဲ ကြီး ဦး မှာ ပါ ။
အ ရင် တုံး က တော့ ၊ ၀ ထ္ထု တွေ ဖတ် ပြီး စိတ် ကူး ယဉ် မိ ဘူး တာ ။
ကိုယ် အ ရမ်း ချစ် ရ တဲ့ မိန်း က လေး ကို….။
ကိုယ် တ ကယ် ချစ် ရ တဲ့ သူ ရဲ့ လက် က လေး သာ ကိုင် ခွင့် ရ ခဲ့ ရင်…..။
အ နား လေး ကပ် ပြီး န ဖူး လေး နမ်း နိုင် ခဲ့ ရင်…..။
ဒီ က မ္ဘာ မှာ ကိုယ် ဟာ အ ပျော် ဆုံး လူ သား ဖြစ် ရ လိမ့် မယ် လို့ ယုံ ကြည် တဲ့ လူ သား တ ယောက် လို့ ခံ ယူ ခဲ့ မိ ဘူး တယ် ။
ဘယ် လို မှ မ မျှော် လင့် ထား ဘဲ ၊ စိတ် ကူး ယဉ် တာ လေး က ၊ လက် တွေ့ ဖမ်း ဆုပ် ပိုင် ဆိုင် ခဲ့ ပြီး ကာ မှ ၊ ဒီ အ တိုင်း ပြီး ဆုံး သွား ရ မှာ ကို ။ဘယ် လို မှ ကိုယ် ခံ စား လို့ မ ရ ဘူး ။
မ မြင် ဘူး တော့ ၊ မူး မြစ် ထင် တဲ့ ။ မ ချစ် ဘူး တဲ့ ကိုယ် က အ ရုး တ ယောက် လို ဘဲ ။ ခံ စား ရ မိ တယ် ။
လှ သော ပန်း တို့ မည် သည် ၊ အ ကြွေ မြန် ၏ ။ ဥ ဒေါင်း ငှက် တို့မည် သည် အ သက် တို ၏ တဲ့ ။
ကိုယ် ကြား ဘူး တာ ပါ ။ ကေ က လှ တဲ့ သူ မို့ အိမ် က စိတ် မ ချ လို့အ ဒေါ် က အောင် သွယ် တော် ဖြစ် ခဲ့ တာ လို့ ပဲ နား လည် မိ လိုက် ရ ပါ တယ်။
ကေ့ အ ဖြစ် သ နစ် တွေ အား လုံး ကြား ရ တဲ့ ကိုယ် က …..
မ ဖြစ် နိုင် တာ ကို တမ်း တ ရင်း ၊ အ ရှုံး တ ရား ကို ရင် ဆိုင် ရ တဲ့ သူ ။ ကိ န္န ရီ ချောင်း ချား ထက် ဆိုး နေ ခဲ့ ပြီ ဆို တာ ။ တောင် ၀င် ရိုး စွန်း နဲ့မြောက် ၀င် ရိုး စွန်း ။ ဆို တဲ့ အ စွန်း နှစ် ဖက် အ ကြား မှာ ။ ရပ် နေ ကြ တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် နေ တယ် ဆို တာ ကို ကိုယ် တ ကယ် နား လည် ခံ စား မိ လိုက် ရ ပါ တယ် ။
မိုး က ဘယ် တော့ မှ မ ပြို ပါ ဘူး….။
မ ဖြစ် နိုင် တာ ကို..။
မိုး ပြို ဘို့ အ တွက် မျှော် လင့် နေ မိ တာ က တော့ ကိုယ် ရယ် ပါ ဘဲ ။
ကေ့ ရဲ့ ….။
နက် မှောင် ထူ ထဲ တဲ့ ဆံ ကေ သာ လွှ လွှ ။
ဇင် ယော် တောင် မျက် ခုံး ။
သ န္တာ ရောင် နှုတ် ခမ်း ။
ရွှန်း လဲ့ တဲ့ မျက် ၀န်း ။
အ ပြုံး လှ လှ တွေ အား လုံး က ၊ ကိုယ့် ကို ဖမ်း စား နိုင် ရက် လွန်း လှ တယ် ။
လျှပ် တ ပျက် တ ရေး နိုး ရင် တောင် ၊ ကိုယ့် မျက် ၀န်း ထဲ က မ ထွက် နိုင် ခဲ့ ဘူး ။
ကေ့ ကို တ ကယ် ချစ် မိ သွား တာ…။
အ ရမ်း ကို ချစ် မိ သွား တာ….။
ကိုယ့် ရဲ့“ချစ် သော ကေ ပါ” ဆို ပြီး ။ တစ် ဆွေ မျိုး လုံး ကို သိ အောင် ကြေ ငှာ ပြော ပြ လိုက် ချင် တယ် ။
နှစ် တွေ ဘယ် လောက် ပဲ ကြာ ကြာ ပါ…..။
ပြန် ဆုံ စည်း ဖို့ယုံ ကြည် ချက် များ စွာ နဲ့ စောင့် နေ ပါ့ မယ်…။ ကိုယ် မျှော် လင့် နေ မယ် နော် ကေ ….. ။
အစ် ကို သု ခ ….။
စာ ကို ဖတ် အ ပြီး မှာ….။ မီး ရှို့ဖျက် ဆီး ပစ် လိုက် ရ ပါ သည် ။
သည် စာ ကို ၊ အ မေ သိ က မ လွယ် ။ အ ဖေ သိ က မိုး မီး ထ လောင် ချေ ဦး မည် ။ ကေ့ အ နေ နဲ့ ခံ စား မိ ရ သည် က ရှက် စိတ် လွန် ကဲ မှု များ သာ ဖြစ် လို့ နေ ပါ တော့ သည် ။
“ချစ် သော ကေ” တ ယောက် စဉ်း စား မိ သည် က ၊ ဘ ၀…၏ ရှေး ရေ စက် အ ကြောင်း များ ကြောင့် သာ ။ ဆုံ ခဲ့ ကြ ။ ၀မ်း နည်း ကြ ။ ကြေ ကွဲ ကြ ။ ပျော် ရွှင် ကြ ။ သံ ယော ဇဉ် တွယ် ကြ ။ ဖြစ် ကြ ရ သည် ဟု သာ ။ ထင် မိ ပါ တော့ သည် ။
Hnin Hnin says: “ချစ်သောကေ” က မျှော်ရတာ အတော်ကြာ..ပေါ်လာတော့လည်း ဇာတ်သိမ်းနဲ့ပါ..း)
ဇာတ်လမ်းဖတ်ပြီးတော့ အားမရသလိုလိုနဲ့ မတင်မကျဖြစ်ကျန်ခဲ့ရတယ်..
ဇာတ်သိမ်းကို အတင်းလှစေချင်မိတာကိုး..း)
အစကတည်းက အန်တီကေရဲ့ hints တွေအရ မပေါင်းဆုံတော့မယ့် ဇာတ်လမ်းလို့
နောက်ဆုံးတော့လည်း ကိုသုခလည်း အရှုံးသမားပဲ ဖြစ်သွားရတာပဲနော်
ကိုသုခရဲ့ အနမ်းနဲ့ရင်ငွေ့ခိုလှုံရတာကတော့ ကေ့အတွက် ပထမဆုံး ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အနမ်းများလားလို့သိချင်မိပါတယ်…ကိုသုခက ကေ့အပေါ် စိတ်ခံစားမှုတွေများသလောက်
ကေကတော့ သိပ်မများဘူး..တိမ်းညွတ်မှုတော့ ရှိကောင်းရှိခဲ့ပါမယ်…
ဘာပဲပြောပြော ဇာတ်လမ်းလေးက….”သမီးရဲ့ဦး” လောက် မလေးနက် မလှပပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု
ရှိပါတယ်….နောက်ထပ်လည်း ဆက်ပြီးရေးပါ…အခုလက်ရှိ အချစ်နဲ့ ဆုံစည်းရပုံလေးလည်း
ရေးဦးမလားလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်…း)…အဲဒါဆို ပိုပြီးဖတ်လို့ကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်…၀တ္ထုမဖတ်ပေမယ့် အန်တီကေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို နှစ်သက်မိပါတယ်…
အရီးခင်လတ် says: အစ်ကို သုခ ကို နောက်ထပ်ပြန် မတွေ့တော့ဘူး ပေါ့။
သူ့အတွက် စိတ်တော့ မကောင်းပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဖူးစာ ဆိုတာ ပါမှ ဆုံရတာမဟုတ်လား အစ်မအေးရေ။
ကြောင်ကြီး says: သုခ
aye.kk says:ံHnin Hnin,ရေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9925
မောင်ပေ says: အန်တီအေးအနေနဲ့ 
ကိုသုခ နဲ့ ခဏတဖြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်
အမျိုးတွေမို့ တွေ့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Ma Ei says: ခုထိများ ချစ်သောကေ ကို
စောင့် မျှော်နေတယ် ဆိုရင်ဖြင့်
အစား သမားမို့ ပဲခူးက မြေပဲလိပ်လေးတွေကိုလဲ
aye.kk says: မမရေ…
pooch says: ငယ်ချစ်ဦးမို့ ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်ပြီး တော်တော်နဲ့ အချစ်သစ်မရှာနိုင်တာဖြစ်မယ် အန်တီအေး။ တော်ပါသေးရဲ့ ကိုသုခကအိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ခဲ့လို့ မဟုတ်ရင်တယောက်ထဲ လွမ်းကျန်နေခဲ့မှာ။
MaMa says: ချစ်သူခင်သူများတဲ့ မအေးရဲ့ ဘ၀ကံ အကျိုးပေးက စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းရဲ ရင်နာစေတဲ့စန်း လိုများ ဖြစ်နေသလားပဲ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8345
ဆူး says: ချစ်သော ကေ ကတော့ ဘာ လုပ်လုပ် အမြဲတမ်း အစ်မ ကို ပဲ မျှော် ကြည့်နေရသလိုပဲနော်.. အရာရာ သူ့ ခြေရာ နောက် လိုက်နင်း ရတဲ့ ခံစားချက်ကလည်း တမျိုးလေးပဲ.. ခြေရာ နင်းတဲ့ အလုပ်က လွယ်မယောင် နဲ့ စိတ်မောတယ်.. ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်ထွင်တာကတော့ ခက်တယ် ထင်ရပေမဲ့ စိတ်ပေါ့ပါးတယ် ထင်မိတာပါပဲ။
ကိုသုခ နဲ့ ရေစက် မပါလို့ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
aye.kk says: ဆူးရေ..
Comments By Postကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - မောင် ပေ - ခရီးသည်ကြီးbin bo..........(ဘင်ဘို) - မောင် ပေPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - Miss Crystalline - TheWinner Getprizeမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - TheWinner Getprize - Mလုလင်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - ခရီးသည်ကြီး - natureဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) - Mobile13နယ်မြေခံ စစ်တပ် ရဲ တို့ ငွေကြေး လာဘ်ယူကာ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ပစ်တော့မဲ့ ကုလားနဲ့ နွား သစ် မှောင်ခို ကိစ္စ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - ခရီးသည်ကြီး - TNAငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - Ko chogyiစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - Ko chogyi - MaMaလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ko chogyi - Ma Maရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TheWinner Getprize - ကိုရင်စည်သူကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - Ko chogyi - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ခရီးသည်ကြီး - ကိုရင်စည်သူအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - uncle gyiမပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကလေး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - rain pricessကား ဒုက္ခ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13နံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဦးကြောင်ကြီး“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - TNAဘားလမ်းက ပြန်ဖို့ ဘက်စ်ကားခ မရှိတဲ့ နေ့က - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ခင် ခတွံတေးအလှူ.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - kyaw hteikဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - phoe choယုံလား? - uncle gyi - KZပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities